BullyingCanada - kupa vana vanodheererwa ramangwana rakajeka
akamira pedyo kuti abatsire Tora Rubatsiro Wana Rubatsiro Zvino tsigira BullyingCanada Batanidzwa Unogona Kubatsira BullyingCanada anovimba nevane rupo
imwe yemhando yekugadzirisa kudheerera
Isu tiripo kuti tikutsigire nhanho dzese dzenzira.
BullyingCanada ndiro rega sangano renyika rinogadzirisa mamiriro ekudheerera kune vechidiki vekuCanada nekufambisa zvakananga kutaurirana pakati pevana vanodheererwa, vanovatambudza, vabereki, vadzidzisi, mabhodhi echikoro, masevhisi emagariro, uye, kana zvichidikanwa, mapurisa.
Join Us. Ponesai Upenyu.
Tsigiro yedu yakakosha inogoneswa nevazvipiri uye vanopa sewe.
kuchema kwekubatsirwa kwakapindurwa muna 2021
nguva dzakawanda dzekubatana dzakaitwa ne BullyingCanada muna 2021, vs. mune pre-denda 2019
vashanyi ku BullyingCanada.ca muna 2021
Zuva nezuva tinogamuchira kuchemera rubatsiro kunopfuura chiuru. Rubatsiro rwenyu rwerupo rwakakosha kuzadzikisa zvinodiwa nevechidiki verudzi rwedu vanodheererwa.
Rob Benn-Frenette, ONB , Co-Muvambi
Hapana mwana anofanirwa kumanikidzwa kusiya chikoro nekuti hazvina kuchengetedzeka kwavari - ndicho chimwe chezvikonzero zvakawanda zvatakavamba. BullyingCanada.
Katie Thompson (Neu) , Co-Muvambi
Ipa vana vanodheererwa ramangwana rakajeka.
Join BullyingCanada mukupa zviwanikwa zvakakosha, zvinoponesa hupenyu nerubatsiro kune vechidiki verudzi vanotambura zvakanyanya. Pane zvakawanda zvingasarudzwa kuti ubatanidzwe-kubva pakuva mumwe wevapi vedu vane rupo kusvika pakuzvipira kumutsara wekutsigira kana kubatsira hofisi yekumashure. Bata nesu nhasi kuti udzidze zvakawanda.
Tose tiri mune izvi pamwe chete—zviuru zvepwere zvinotsamira patiri.
Ndokumbira mupe izvozvi, nekuti nguva yega yega yakakosha!
Kana mwana achinetswa kwenguva refu, mukana mukuru wokuva namavanga omuviri, ndangariro, uye ndangariro anogona kugara kwoupenyu hwose. Kudheerera kunogona kuparadza chivimbo, kuchisiya vana vakasununguka uye vasina kuchengeteka, nemarwadzo emudumbu, kutya, uye kurota zvinotyisa. Havagoni kuisa pfungwa dzavo pachikoro, zvichiita kuti vawane mamakisi asina kunaka izvo zvingaita kuti mikana yavo yeramangwana iri ive shoma. Kana kudheerera kusingaregi, kuora mwoyo uye kushungurudzika zvinogona kuita kuti vana vazviuraye.
Zvinoda ushingi hukuru kuti vana vasvike kwatiri kuti tibatsirwe. Chipo chako chinoita kuti kuchema kwese kweshungu kwerubatsiro kupindurwe, chero zuva… chero nguva. Mupiro wako unotibatsira kuti tirambe tiri vana for as long as it takes for us to stop the bullying and give them a brighter future!
Chii chinonyatso tsanangura kubvunza kwako? (*)Ndiri pwere uye ndinoda kubatsirwa kuti ndirege kushungurudzwa.Ndinoda rubatsiro nezvemupiro kana risiti yemutero.Ndinoda kutaura nemumwe munhu nezve legacy giving kana estate planning.Ndinoda kuzvipira BullyingCanada.Ndine mubvunzo kana mhinduro.Ini ndiri nhengo yezvenhau uye ndinoda kubata.Ini handichadi kuve patsamba yako yetsamba.
Chiziviso Chakakosha NezveKuenderera mberi kweCOVID-19 Denda
Nekuda kwekunetsekana kwehutano hwepasi rose uye zviwanikwa zvishoma, BullyingCanada achange achishanda neakaderera neakakosha masevhisi chete. Izvi zvinoreva kuti masevhisi edu (email, chat chat, rutsigiro rwemavara, uye mitsara yefoni) anongowanikwa zvakananga kune vechidiki panguva yedenda. Vamwe vanhu vese vanozoiswa mumutsara wekutevera pane imwe nguva inotevera.